Qalbiga u qabo Sadler - Xarunta Caafimaadka ee Sadler
Xarunta Caafimaadka ee Sadler, hadafkayagu waa mid fudud: Si aan u horumarino caafimaadka bulshadeena anagoo bixinayna daryeel loo dhan yahay, tayo sare leh iyo naxariis leh. Adeegyada waxaa ka mid ah daryeelka caafimaadka aasaasiga ah ee bulshada ku salaysan, daryeelka ilkaha, adeegyada caafimaadka dabeecadda, iyo adeegyo taageero oo kala duwan. Dhammaan adeegyadayada waa u diyaar qof walba iyada oo aan loo eegin awoodda ay wax u bixiyaan. Bukaanno badan ayaa ah kuwo aan caymis lahayn, aan caymis lahayn, ama shakhsiyaad iyo qoysas dakhligoodu hooseeyo. Barnaamijka qiimo dhimista khidmada liidata ayaa diyaar u ah dhammaan bukaanada, kaas oo bixiya dhimis biilka iyadoo lagu saleynayo tirada qoyska iyo dakhliga.
Caafimaadka wanaagsan ayaa udub dhexaad u ah fayo-qabka qofkasta, muhiimna u ah cilaaqaadkeena, waana lagama maarmaan in la dhiso qoysas wax soo saar leh, ganacsiyo, iyo bulshooyin. Caafimaad darro ama la’aanta helitaanka daryeel caafimaad oo la awoodi karo ma saamayso qofka oo keliya, laakiin dhammaan qoyska iyo bulshada. Arrimaha ilkuhu waxay saamayn karaan caafimaadka guud ee qofka. Arrimaha caafimaadka dhimirka ayaa adkeyn kara in shaqada la sii wado. Ardayda aan loo baahnayn, imtixaanada caadiga ah waxay ku halgamaan dugsiga.
Sadler Health Centre waa bixiyaha kaliya ee caafimaadka aagga hadafkiisu yahay inuu bixiyo adeegyada daryeelka caafimaadka dadka iyadoon loo eegayn awooddooda lacag bixinta. Xarunta caafimaadka ee Sadler waligeed kama weecin doonto qof kasta oo u qalma aagga adeega sababtoo ah awood la’aanta lacag bixinta – waligeen ma haysano mana yeeli doono. Taasi waa ballankayaga ku aaddan bulshadan. Waxaan ku dadaalnay inaan sare u qaadno dakhliga iyo ka faa’iidaysiga deeqaha, laakiin la’aanteed taageerada deeqsinimada leh ee dadka adiga oo kale ah, Sadler si buuxda uma fulin karo hawshan.
Ku-deeqiddaadu waa maal-gelin lagu sameeyo caafimaadka bukaannadayada iyo firfircoonida bulshadeenna. Waad ku mahadsan tahay, waxaan awoodnaa inaan horumarino caafimaadka bulshadeena anagoo bixinayna daryeel loo dhan yahay, tayo sare leh, iyo naxariis leh. Waad ku mahadsan tahay inaad gacan ka geysato dhisidda nolol caafimaad leh ku dhawaad 10,000 bukaan oo Xarunta Caafimaadka Sadler ah. Hadafkayagu waa in aan ka caawino dadka in ay gaaraan noloshooda ugu caafimaadka badan iyada oo loo marayo helitaanka daryeel tayo leh. Waxaan aaminsanahay in bulsho xoog leh berrito ay ka bilaabato shakhsiyaad caafimaad qaba maanta.
Taageeradaadu waxay tusi doontaa inaad Qalbi u leedahay Sadler, bukaanada aanu u adeegno iyo caafimaadka bulshadeena!
Xarunta Caafimaadka ee Sadler » Siyaabaha wax loo bixiyo – Qalbi u yeelo Sadler! » Qalbiga u qabo Sadler